I-D-nurse Iselfowuni yeGlucose yeMitha-yeGazi leGlucose yokujonga uQeqesho-iSinocare
Umongikazi we-D-nurse Glucose Meter
Imitha yeGlucose yeGazi ye-Smartphone
Inkqubo yokujonga eswekile yegazi kwi-Dnurse SP1 ibandakanya:
1. Sebenzisa i-SP1 yemitha yeswekile yegazi
2. Gweba umcu wovavanyo lweglucose yegazi
3. Gweba i-SP1 APP kunye nesisombululo solawulo lweglucose yegazi.
Basebenza kunye ukuvavanya ngokuchanekileyo iswekile yegazi. Sebenzisa esinye isicatshulwa sovavanyo kunye nesisombululo solawulo nge-Dnurse SP1 yemitha yeglucose yegazi yakho inokuvelisa iziphumo ezingachanekanga.
Sebenzisa umsebenzi we-SP1 APP:
1. Imilinganiselo yeglucose yegazi: Sebenzisa i-SP1 yeglucose yemitha yegazi nge-smartphone, iyanceda ukulinganisa iswekile yegazi, kunye nokonga idatha.
2. Ulawulo lweDatha: Idatha esele ikhona iya kuthi icwangciswe ngokuzenzekelayo ibe ziigodo zeswekile, iitafile, ijika kunye neetshathi, ezenza kube lula kuhlalutyo lwedatha. Abasebenzisi banokongeza enye idatha njengokutya, umthambo, kunye namayeza, njl.
3. Isikhumbuzi se-Dnurse SP1: Dnurse SP1 APP iqokelela idatha yeglucose yegazi ihlalutya idatha ngokufanelekileyo. Umsebenzisi unokuhlengahlengisa isicwangciso sokujonga, isicwangciso sokukhumbuza amayeza kunye neminye imisebenzi elandela loo datha.
4. Ulwazi: Ukubonelela abasebenzisi ngolwazi lwakutshanje lwesifo seswekile.
5.Umyalezo kunye nengxoxo: Umyalezo kunye nengxoxo phakathi kwesigulana ukuya kwisigulana, isigulana-izihlobo kunye nabasebenzi bezonyango.
Umthamo wegazi 0.6μL
Ixesha lokulinganisa 10s
Uvavanyo lweemichiza I-FAD glucose dehydrogenase, potassium
i-ferricyanide, izinto ezingasebenziyo
Imeko yokugcina yovavanyo 1 ℃ ~ 30 ℃
Dimension I-103 × 57 × 22 （mm）
ubunzima 1.8oz (52g) ngaphandle kwebhetri
Power umthombo Ibhetri ye-lithium-ion eyakhelweyo, i-DC 3V
Imeko yovavanyo Ubushushu: 10 ℃ ~ 35 ℃
≤80% RH (ukungavumi)
I-Hematocrit: 30% ~ 60%
Qaphela: Sebenzisa ngokusingqongileyo okuchaziweyo
Imeko yokusebenza 10 ℃ ~ 35 ℃ RH≤80%
Uluhlu lwesilinganiselo 20 ~ 600 mg / dL okanye i-1.1 ～ 33.3mmo / L